ISOFTWARE YOYILO LWEPERGOLA - IINDAWO ZOKUPHILA NGAPHANDLE
Eyona iindawo Zokuphila Ngaphandle Isoftware yoyilo lwePergola
Isoftware yoyilo lwePergola
Nazi iipokethi zethu eziphambili ze-software ye-pergola efanelekileyo yokuncedisa ukudala isakhiwo sakho kwaye uyibone ngamehlo kwiyadi yakho.
Abanini bamakhaya bahlala bejonga iindlela zokuhlaziya amakhaya abo. Nokuba ujonge ukuphucula indawo ohlala kuyo ngaphandle okanye ukongeza ixabiso kwiyadi yakho, ukulungiswa komhlaba yindawo entle ongaqala kuyo. Ukuma komhlaba kunokuba nzima kwaye kubize, kwaye abantu abaninzi abaqinisekanga ukuba baqale njani iprojekthi enkulu kangaka. Siza kwenza oku kube lula kuwe kwaye sikunike ulwazi ngepargolas, uhlobo lwesakhiwo sokulungisa umhlaba, kunye nendlela onokuthi uhambe ngayo ngokuyila enye yeyadi yakho.
Apha ngezantsi sidwelise eyona software ilungileyo yokuyila i-pergola ukukunceda wenze ngasemva kwamaphupha akho.
apho uqala khona ukucwangcisa umtshato
IVizterra (Uvavanyo lwasimahla)
I-AutoDesk (Uvavanyo lwasimahla)
I-Idea ye-Spectrum yeXesha lokuHlaba lokuHlalwa komhlaba (kuhlawulwe)
Iyonke iNdawo ye-3D kunye neDisk Deluxe (ehlawulelweyo)
Indlu yokwakha eyiVenkile kunye neNdawo yokuHlawula (ihlawulwe)
Suite yoMyili weKhaya (ehlawulelweyo)
Isoftware yeSketchUp kulula ukuyisebenzisa kwaye inezicwangciso ezininzi zokunceda nabani na onokufuna inkqubo yoyilo lwesoftware. Ezi nkqubo zintathu ziphambili bacebisa ukuba zisetyenziselwe ubuqu babo yiSketchUp Free, iSketchUp Shop, kunye neenkqubo zeSketchUp Pro.
Injongo yabo kukuhambisa inkqubo kubathengi elula ngokulula njengokuzoba kodwa benze imodeli ye-3D ngelixa besenza njalo. Ewe, uguqulelo lwasimahla alunazo iimpawu ezifanayo neenkqubo ezihlawulelweyo kodwa usenokudala phantse nantoni na onokucinga ngayo.
ISketchUp yasimahla ikwayinkqubo ye-Intanethi. Ngamanye amagama, kuya kufuneka ungene kuphela ukuze uqalise - awudingi ukuba nexhala ngokukhuphela iifayile ezinkulu. Oku kuyanceda kuba unokufikelela kuyo naphi na kubandakanya nokujonga imodeli esemgangathweni kuzo zombini izixhobo ze-Android kunye ne-iOS.
Unokukhangela kwakhona kwi-SketchUp 3D Warehouse yezinto onokuzisebenzisa kuyilo lwakho. Oku kubandakanya ukujonga phezulu kwi-pergolas ukufumana iimodeli ezisisiseko zokusebenza. Le nkqubo isebenza kakuhle njenge isoftware yoyilo .
Indawo yeWebhusayithi: https://www.sketchup.com/plans-and-pricing#for-personal
Le phakheji yesoftware lolunye ukhetho olukhulu kubayili bobuchwephesha bobugcisa. Ngelixa i-AutoDesk yayilinganiselwe ngokwentetho, kulapho iVizterra igqwesa khona. Le nkqubo iyakwazi ukukhawulezisa inike intetho enokusetyenziswa ezintlanganisweni nabathengi okanye iikontraki. Kukho izinto ezininzi zokulungisa umhlaba kunye nezityalo kwikhathalogu yenkqubo phantse kuyo nayiphi na iprojekthi yokulungisa umhlaba. Abasebenzisi banokukhetha ukusebenzisa ukudityaniswa kwe-GIS okanye ukudityaniswa kwemidiya yoluntu ukuba kukho imfuneko yoko.
Ngamaxabiso aqala kwi- $ 95 ngenyanga, iVizterra lukhetho olukhulu kumashishini afuna ukwandisa ukuboniswa kwawo ngendleko eziphantsi zenyanga. Ukuphononongwa okungalunganga kwale nkqubo kunqabile kwaye kukude, ngesikhalazo esiphambili kukuba le nkqubo ifuna i-RAM eninzi ukuyifaka. Oku kungathatha ukugcinwa okuninzi kwiikhompyuter zomsebenzi, kodwa ngesiqhelo ayisiyiyo ngxaki enkulu kubasebenzisi.
Unokuzama uvavanyo lwasimahla lweenyanga ezi-1 zeVizterra. Ukuba ungumninikhaya osebenza kwiprojekthi yexesha elinye, oku kunokuba sisisombululo esihle kuwe.
Indawo yeWebhusayithi: https://www.structurestudios.com/software/3d-landscape-design-software
Le software ilungele iingcali ezikulungeleyo ukubeka imali ethile kwimveliso esemgangathweni. Kukho iindlela zokuzoba i-2D kunye nokuhanjiswa kwe3D, okwenza ukuba kube kuyilo kubayili bemeko-bume abazama ukuphucula ishishini labo. Kukho izinto ezininzi kule nkqubo, kubandakanya ukubanako ukwenza iziketshi ezotywe ngesandla.
Kwindawo yesoftware yoyilo lwesoftware, le nkqubo inemiqobo. Uya kufumanisa ukuba le nkqubo ayinazintengiso zininzi kunye neempawu zokubonisa njengezinye iipakeji zesoftware, ezinokuba zimbi kwabanye abayili. Ngaphandle koku, amaxabiso afikelelekayo ale nkqubo axabisa ukusikelwa umda okukhoyo ngoku. Kumashishini okugcina umhlaba anegumbi elithile kuhlahlo-lwabiwo mali, i-AutoDesk lukhetho olukhulu kuyilo lwe-pergola ngamaxabiso aqala kwi- $ 195 ngenyanga.
Olu lolunye ukhetho olunokuvavanywa simahla ngabanini bamakhaya. Ngcono nangakumbi, i-AutoDesk ineenkqubo ezisimahla zabafundi. Ke, ukuba ufunda ukufunda ukusebenzisa ezi nkqubo kunye nokufezekisa izicwangciso ezenziwe kuzo, ungaqala ukuyila eyakho i-pergola yasimahla.
Indawo yeWebhusayithi: https://www.autodesk.com/
Le nkqubo lukhetho olukhulu kuye nakubani na, ngaphandle kwamava kuyilo lwembonakalo yomhlaba okanye izakhono zekhompyuter. Le nkqubo ilula ukuyisebenzisa kwaye kulula ukuyisebenzisa, iyenza igqibelele kubaphengululi abatsha kuyilo lomhlaba. Inezinto ezinzulu ngakumbi ezilungele iingcali ezisebenzisa isoftware.
Izinto ezingaphezulu kwama-5 000 ezinengca ekufuneka zibandakanywe kuyilo, kunye nenani elifanayo lezityalo, le software inento yokudibanisa ngaphezulu kwamawaka alishumi izinto onokongeza kuyilo lwakho. Kukho inani elikhulu lezixhobo onokuzisebenzisa kuyilo lwakho, kodwa akukho nkxaso kwi-Intanethi ukuba awuqinisekanga ukuba uzisebenzisa njani.
Le nkqubo ikuvumela ukuba ujonge uyilo lwakho kwi-2D okanye kwi-3D, kuxhomekeke kukhetho lwakho. Ngokusetyenziswa kwembono ye3D, ungathatha inyani ebonakalayo kuyilo lwakho ngokungathi ubunakho ukuhamba kuyo ngokwakho.
Le software iza ngexabiso le- $ 79.95. Oku kuyenza ibize kancinci kunesoftware elawulwa ngumnini-khaya. Nangona kunjalo, iyenzela iindleko kunye neempawu zayo ezahlukeneyo. Olu khetho lukhulu lwezinto ezikhethiweyo lunceda wenze imodeli eneenkcukacha zento oyifunayo i-pergola yakho kunye nembonakalo yomhlaba ejikeleze yona.
Olunye uphawu olusebenzayo olunale nkqubo yinkqubo yabo yokuhamba ngokwenyani. Oku kuya kukunceda ubone ukuba iindawo eziphilayo zoyilo lwakho ziya kukhula njani ngokuhamba kwexesha. Oku kukunceda ufumane umbono wokuba izityalo ozikhethileyo ziya kukhula njani ekuhambeni kwexesha. Ngale ndlela, uya kwazi ukuba utyale umthi okanye utyale kufutshane ne-pergola yakho eya kuthi ilahle uyilo. Into efana nale ikunceda ekulinganiseni ukuba ungakanani umsebenzi oza kungena ekugcineni indawo ejikeleze ipergola yakho.
Indawo yeWebhusayithi: https://www.ideaspectrum.com/home-landscaping-software/
Olunye ukhetho olukhulu yi-3D 3D Landscape kunye neDisk Deluxe. Le nkqubo ngokuqinisekileyo ijolise kubaphengululi, kodwa isebenza kakuhle le njongo. Le software isisiseko, inegrafiki engalunganga kwaye inezinto ezimbalwa kuphela. Ngaphandle koku, ixabiso layo njengesixhobo sokufunda alinakubaxwa. Kukho iitoni zezifundo ezibonisa ukuba isoftware isebenza njani kunye nendlela yokuyisebenzisa. Iitutorials zibandakanya izikhokelo zenyathelo ngenyathelo, kunye neevidiyo ezinceda ukucacisa inkqubo yokuyila izinto ezahlukeneyo zomhlaba.
Indawo yonke ye-3D iza ngendleko ephantsi ngokumangalisayo, eyenza ukuba ifikeleleke ngokulula kubanini bamakhaya nakwabanye abatsha kuyilo lwembonakalo yomhlaba. Ngelixa ungafuni ukuxhomekeka kuphela kule software, yenza ilitye elikhulu onokulisebenzisa ukuze ufunde iziseko ngaphambi kokuba udlulele kwiphakheji yesoftware enzima ngakumbi.
Indawo yeWebhusayithi: Isoftware nganye
Ukuba ujonga ukhetho olukhulu lwe-semi-professional, sukujonga ngaphezulu kweKhaya loYilo lweKhaya kunye neLandscape. Kubiza kakhulu kune-3D 3D Landscape kunye neDisk Deluxe, kodwa isabiza kakhulu kuneRealtime Landscaping Plus. Ngaphandle kwezinto ezingama-7 500 kunye nezityalo ekufuneka zibandakanyiwe kuyilo lwakho, le nkqubo inezinto ezaneleyo zokuba ixabise iindleko.
Kukho ulwakhiwo olusebenzayo olulungele abasebenzisi abanolwazi oluthile okanye amava okuzoba kuwo. Ukuba i-wizard yokwakha ayonelanga, nangona kunjalo, le software ayinakuba lolona khetho lufanelekileyo. Kukho isixa esilinganiselweyo kuphela senkxaso kwi-Intanethi efumanekayo kubasebenzisi, kodwa le ayisiyongxaki enkulu kubasebenzisi abanamava kuyilo lomhlaba. Ngamaxabiso angaphantsi kweedola ezili-100, i-Virtual Architect kunye ne-Landscape lukhetho olukhulu kubaphengululi abafuna ukuphucula izakhono zabo zoyilo lwe-landscape.
uthenga ntoni ngesipho sokuhlamba somtshato
Indawo yeWebhusayithi: Bona kwiAmazon
Le phakheji lolunye ukhetho oluphakathi-kwendlela oluyilo loyilo lomhlaba. Kukho izinto ezimbalwa kwilayibrari kuneKhaya loYilo lweKhaya kunye noMhlaba nge-6,500. Ngaphandle koku, kukho iqonga le-Intanethi elinokunika ubutyebi bolwazi kunye nenkxaso kubasebenzisi.
Le foram ye-Intanethi inika iSuite yoyilo lwaseKhaya ithuba elingaphezulu kweKhaya loYilo lweKhaya kunye neLandscape, engenalo olo hlobo. Elinye inqaku elinomdla livumela abasebenzisi ukuba bajonge izithunzi eziza kuphuma zizinto. Oku kulungile kubasebenzisi abajonge ukwandisa ubungakanani bomthunzi eyadini okanye kwipatio yabo. Baninzi abasebenzisi abasebenzisa le nkqubo isoftware yoyilo ecaleni kweemfuno zabo zokudalwa kwepergola.
Le nkqubo inendawo encinci yokufunda, ngoko kuya kukuthatha ixesha ukulungelelanisa nokuyisebenzisa. Ngoncedo lweforum ye-Intanethi, nangona kunjalo, nabani na angaloyisa eli gophe lokufunda ukuze afumane okungcono kwi-Suite yoyilo lwasekhaya. Ngamaxabiso ajikeleze i-100 leedola, le nkqubo ayinayo imali yenyanga enokuthi iyenze ibe nomtsalane kakhulu kubaqulunqi kuhlahlo-lwabiwo mali.
Ukuba ujonge ukuguqula iyadi yakho ngokulungisa umhlaba, ukuyila i-pergola yiprojekthi enkulu ekufuneka uyiqwalasele. Izibonelelo zokuba ne-pergola zininzi, ekuphela kwento engezantsi lixabiso eliphantsi ngokumangalisayo. Ngoku ukuba uqonde ngcono isoftware yoyilo lobume bomhlaba , Unayo yonke ingcaciso oyifunayo ukuyila i-pergola eya kuzisa ubomi obutsha kwiyadi yakho okanye kwindawo yepatio.
umama omnyama oluhlaza womtshakazi unxiba
nini uku-odola ilokhwe zintombi
Uyilo lweempawu zamanzi